Maxay sameysaa SKM - Dongguan Sunkia Makiinado Co., Ltd.
Adeegyada farsamada waxaa lagu sameyn doonaa dhammaan dhinacyada, laga bilaabo nidaamka iibinta kahor illaa nidaamka iibka kadib. Marka loo eego astaamaha macaamiisha gaarka ah iyo filashooyinka gaarka ah, waxaan ku siineynaa talooyin iyo adeegyo habaysan.
takhasusleyaal waxay ku bixin karaan tababaro kala duwan soosaarkeena, ama si toos ah xarumaha macaamiisha. Waxaan hubineynaa in shaqaalahaaga ay si wanaagsan u fahmeen qalabka SKM si loo damaanad qaado waxtarkaaga sare iyo wax soo saarkaaga.
Waxaan uhadleynaa tas-hiilaadkaaga. Iyada oo loo marayo dhammaan cabbiraadaha iyo kormeerka oo faahfaahsan, waxaan kugu wargalinaynaa dhammaan hagaajinta, hagaajinta iyo dayactirka xarumahaadu u baahan yihiin. Iyada oo loo marayo dayactirkayaga, waxaan saadaalineynaa dhammaan dhibaatooyinka iman kara, ka caawin mashiinkaaga inuu si habsami leh u shaqeeyo wakhti yar oo yar.
SKM waxay leedahay keydkeeda si habeysan oo habeysan, dhamaan qeybaha waa kuwo gabi ahaanba u qalma oo diyaar u ah in loo diro meelkasta oo adduunka ka mid ah. Waxaan damaanad qaadaynaa waqtiga ugu yar ee la bixinayo iyo tayada ugu fiican. Waxbarista golaha waxaa lala soo diri doonaa qeybahayaga dayactirka.
Si macaamiishayada loogu soo bandhigo wax soo saarka ugu wanaagsan, SKM waligeed ma joojiso ka shaqeynta cusbooneysiinta iyo hagaajinta wax soo saarkeena. In ka badan 12 sano oo khibrad ah oo aan ku leenahay berrinka, waxaan khabiir ku nahay inaan hagaajino xarumahaaga shaqooyinkaaga gaarka ah.